नि: शुल्क सजिलो अनलाइन शब्द Scrambler - Word Orbit
१२ वर्ण सम्म प्रविष्ट गर्नुहोस्
को साथ शुरू गर्नुहोस्
हामीलाई out बाहिर रेट गर्नुहोस्
नि: शुल्क सजिलो अनलाइन शब्द Scrambler
शब्द हाथापाई के हो?
किन प्रयोग शब्द scrambler?
शब्द हाथापाई धोखा
किन हाम्रो शब्द scrambler राम्रो छ?
को हाथापाई शब्दहरू उदाहरण सूची
शब्द scrambler फाइदाहरू
तपाईं सोच हुन सक्छ किन शब्द Scrambler द्वारा anagrams र scrambling शब्दहरू सुलझाने एक परम आनन्द छ?
राम्रो, शब्द संग खेल्दै भन्दा बढी रोमाञ्चक अरू के हुन सक्छ, यो हाम्रो अवकाश हामी मुक्त छन् र केही गरिरहेको को नरमाइलो हुन्छ जब समयमा सबैभन्दा सुखद गतिविधि छ।
त्यहाँ भारी यस्तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (मित्र संग शब्द), Jumble, Literati, स्क्रयाबल, आदि रूपमा शब्दहरू खेल्न तरिका र खेल, हो यी खेल मात्र भनेर सुधार एक सुखद समय तर पनि मस्तिष्क busters छ तपाईंलाई मदत आफ्नो संज्ञानात्मक र समग्र मानसिक स्वास्थ्य।
शब्द Scrambler धेरै रोचक मडारिनुहोस् छ जो अनलाइन शब्द हाथापाई खेल हो।
यो शब्द बनाउने र रोमाञ्चक खेल हो; संसारको scrambler को फरक छ unscrambler शब्द । शब्द सबै सम्भव शब्दहरू सक्र्याम्बल प्रयोग गर्दा शब्द scrambler शब्दहरू अनस्क्र्याम्बल प्रयोग गरिन्छ unscrambler।
संसारभरि धेरै महत व्यक्तित्व यी हल anagrams र पहेली खेल को रुचाउनु छन्।
शब्द सक्र्याम्बल वा Jumble केही सुत्र को मद्दत संग, anagrams बनाउन अक्षरहरू scrambling द्वारा प्ले छ कि शब्द पहेली छ।
मार्टिन Naydel पहिलो शब्द हाथापाई खेल पनि यो खेल उत्तेजना भरिएको छ 1954. मा Jumbled शब्दहरू रूपमा जानिन्छ जो शुरू; सबै तपाईं जो चाँडै सकेसम्म अर्थपूर्ण शब्द बनाउन सक्छ अक्षरहरू, सक्र्याम्बल गर्न आवश्यक छ।
तपाईं यो खेल खेलिरहेका छन् रूपमा, कि स्कोर यस खेल को एक प्राथमिक लक्ष्य रूपमा ठान्नुहुन्छ सम्झना र तपाईं हिज्जे शब्द, तपाईंले प्रयोग गर्ने पत्र को कठिनाई को लम्बाइ आधारित सम्पूर्ण स्कोर र पाठ्यक्रम तपाईं पत्ता कति चाँडो र यी शब्दहरू हिज्जे। तपाईंले सामना थप कठिनाई, अधिक handsomely तपाईं सम्मानित गरिनेछ।
सबै खेलाडी सकेसम्म अर्थपूर्ण वाक्य संग आउन अक्षरहरू पुनःव्यवस्थित गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईं अझै पनि स्कूलमा तपाईं थिए जब नयाँ शब्द सिक्दै सम्झना गर्छन्? खैर, यो खेल बढी सम्भावना तपाईंलाई नयाँ शब्द र आफ्नो हिज्जे सिक्न प्रयोग गर्ने तरिकाहरू छ। तपाईं अर्थपूर्ण शब्दहरू बनाउन consonants र स्वरवर्णको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
उदाहरणका लागि, त्यहाँ शब्द “FUMNIF,” छ र तपाईं अक्षरहरू पुनर्व्यवस्थित र अर्थपूर्ण शब्दहरू बनाउन आवश्यक; शब्द Muffin छ। अर्को उदाहरण गर्दा unjumbles र तिनीहरूलाई पुनर्व्यवस्थित “, SNITIS” छ र, यो शब्द हुन बाहिर जान्छ “जिद्दी।”
शब्द scrambling एक आसान खेल हो; तपाईं आफ्नो प्रतियोगिहरु वा साथीहरूको बसाइ अगाडि गर्न अभ्यास धेरै आवश्यक छ।
यो anagrams र पहेली को सुलझाने आउँदा शब्द संग्रह एउटा महत्त्वपूर्ण नियम खेल्छ। त्यहाँ भारी मा समाचार पत्र, पत्रिका, Sudoku, आदि प्रकाशित छन् पहेली को सुलझाने, यस्तो अनलाइन खेल खेल्दै आफ्नो शब्दावली वृद्धि गर्ने उपायहरू छन्
अधिक अधिक संभावना तपाईं आफ्नो शब्दावली विस्तार, अभ्यास, तर समस्या के तपाईं सधैं यी पहेली आफैलाई समाधान गर्न सक्दैन भन्ने छ।
तापनि, तपाईं उत्कृष्ट ज्ञान र शब्दावली छ भने, तर खेल जीत, तपाईँ अझै पनि यी खेल मा सबै भन्दा अर्थपूर्ण शब्दहरू संग आउँदै द्वारा धेरै उच्च स्कोर गर्न आवश्यक छ।
शब्द scrambler मद्दत तपाईंले यी खेल मा उच्च स्कोर हासिल आउछ जब यो छ।
त्यसैले तपाईं यी पहेली र शब्द गेम वा stucks समाधान गर्न असफल वा आफ्नो ज्ञान सुधार गर्न चाहनुहुन्छ जब, तपाईं सफ्टवेयर वा अनुप्रयोग, एक रूपमा जानिन्छ जो देखि मद्दत प्राप्त “शब्द Scrambler।”
यो शब्द scrambler उपकरण तपाईं शब्द सक्र्याम्बल गर्न मद्दत गर्छ। सबै तपाईं पाठ बक्स र भोइला Query मा हाथापाई गर्न चाहनुहुन्छ शब्दहरू प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। शब्द scrambler उपकरण तपाईं को लागि सबै भन्दा अर्थपूर्ण शब्दहरू प्रदर्शन गर्नेछ।
Anagram हाथापाई फरक वाक्यांश वा शब्द को पत्र उलटफेर द्वारा सिर्जना गरिएको छ जो वाक्यांश वा शब्द छ। तिनीहरूले मजा लागि सिर्जना र अर्डर बाहिर यी अक्षरहरू पढ्न रहस्य अर्थ पत्ता लगाउन अर्थ छन्।
तपाईं anagram हाथापाई समाधान गर्दा समय मा, जस्तै गोप्य अर्थ मा हेर्न आवश्यक छैन। बरु, तपाईं तिनीहरूलाई त्यस वर्तमान शब्द पुनःव्यवस्थित गर्न भद्रगोल शब्दहरूको सेट अक्षर र unjumble यी अक्षरहरू मा हेर्न आवश्यक छ।
तपाईंले यी अक्षरहरू unjumbling द्वारा अर्थपूर्ण र लामो शब्दहरू बनाउन सक्छ।
उदाहरणका लागि, “DGUTEB” – “। बजेट” तपाईं unjumble, तपाईं भनिने छ-पत्र शब्द प्राप्त हुनेछ जब त्यस्तै, एक भ्रमित शब्द, “IGLGEG,” र यो तपाईं प्राप्त unjumbled “मूर्ख पाराले हास्नु।”
तपाईंलाई रुचि हुनेछ भन्ने राम्रो कुरा तपाईं अनलाइन anagram हाथापाई र शब्द हाथापाई खेल्न सक्छन् भन्ने छ।
साइटहरु हजारौं तिमी खेल्न अनुमतिको उपलब्ध छन् unscrambler शब्द निःशुल्क साथीहरूसँग खेल।
शब्द scrambler धोखा
यो तपाईं एक आउटडोर खेल खेल्दै कि, वा आफ्नो स्मार्टफोन मा पहेली खेल खेल्न वा खेल scrambling शब्द प्ले कुरा छैन, सबै कुरा खेल जित्न छ।
धोखा तपाईं आफ्नो साथीहरूसँग खेल्दै हुनुहुन्छ विशेष गरी जब ठूलो आनन्द जस्तो देखिन्छ। खैर, तिमी मजा लागि आफ्नो साथीहरूसँग खेल्दै गर्दा, शब्द scrambler धोखा हुन सक्छ।
साथै, तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शब्द अनस्क्र्याम्बल यो अफलाइन प्ले गर्दा धोखा। एक वाइल्डकार्ड प्रयोग यदि तपाईं थप अंक स्कोर छौँ। तपाईं अझै पनि आफ्नो सबै वाइल्डकार्ड प्रयोग पनि धोखा संग उच्च स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो प्रतियोगिहरु भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले एक शब्द हाथापाई शब्दकोश को मद्दत लिनुपर्छ। तपाईं शब्द scrambler र हाम्रो वेबसाइटमा शब्दकोश unscrambler शब्द दुवै पाउनुहुनेछ।
इन्टरनेट जहाँ तपाईं jumbled शब्द राख्नु र unscrambled वा unjumbled शब्दहरू प्राप्त यस्ता साइटहरू भर छ, तर तपाईं सबै भन्दा राम्रो शब्द scrambler आवश्यक छ भने, त्यसपछि तपाईं हाम्रो अनलाइन शब्द scrambler उपकरण प्रयास गर्नुपर्छ।
यी खेल खेल्दै गर्दा अनलाइन मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईंले अनलाइन शब्द स्क्रयाबल शब्दकोश तपाईं आफ्नो समग्र प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्छ कि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो तेज र सबै भन्दा उन्नत शब्द scrambler हाथापाई अक्षर र हाथापाई शब्दहरू तपाईंलाई मदत गर्नेछ; सबै तपाईं पाठ बाकसमा आफ्नो वांछित शब्दहरू वा पत्र प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
तपाईं आफ्नो शब्दावली सुधार वा आफ्नो ज्ञान वृद्धि लागि, मजा लागि खेलिरहेका छन् भने, हाम्रो शब्द scrambler उपकरण तपाईं लागि सबै भन्दा राम्रो छ र सजिलो संग हाथापाई शब्दहरू तपाईंलाई मदत गर्नेछ।
हाथापाई शब्दहरू सूची
हामी भद्रगोल शब्दहरू, jumbled शब्दहरू सूची साझेदारी गर्दै हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो अनलाइन शब्द scrambler उपकरणको मद्दत यी शब्दहरू unjumble र यी सबै परिणाम प्राप्त। तपाईं पनि भद्रगोल शब्दहरू फरक लम्बाइ शब्दहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। सबै तपाईं हाम्रो शब्द उपकरण unscrambler पाठ बाकसमा केही भद्रगोल अक्षरहरू राख्नु र दिनु लागि आराम डु आवश्यक छ।
सम्भावित unscrambled शब्दहरू हुन्;
पाँच-पत्र शब्द: फल
चार-पत्र शब्द: FRIT, दरार, टर्फ,
तीन-पत्र शब्द: फर, फिट, FIR र यति मा
पाँच-पत्र शब्द: TITLE
चार-पत्र शब्द: भन्नुहोस्, LILT, सम्म, ITLL
तीन-पत्र शब्द: बीमार, गरौं झूट र यति मा
पाँच-पत्र शब्द: धोखा, THECA, TACHE
चार-पत्र शब्द: कुराकानी, प्रत्येक, नक्काशी, टेक
तीन-पत्र शब्द: बिरालो, ऐस, अधिनियम, टोपी, द, खाओ र यति मा
सबै भन्दा प्रसिद्ध भद्रगोल शब्दहरू सूची
हुनत संसारभरि लोकप्रिय भद्रगोल शब्दहरू धेरै छन्, हरेक संस्कृति प्रसिद्ध भद्रगोल शब्दहरू सूची छ, तर त्यहाँ पनि शब्द scrambler को मद्दतले हल गर्न सकिन्छ भनेर मनपर्ने भद्रगोल शब्दहरू सबै समय हो।
हाम्रो शब्द scrambler उपकरण तपाईं यस सूची कसरी सक्र्याम्बल र आफ्नो प्रतियोगिहरु माथि रहन सिक्न मदत गर्नेछ।
सबैभन्दा लोकप्रिय भद्रगोल शब्द
ONEROUS – (भारी)
RESSURECTION – (सहवास, tiercerons, ceintures, coinsure, आदि)
SATURANTO – (अन्तरिक्ष यात्री)
SUPEREGO – (पोर्चुगिज)
CLAMBERS – (सक्र्याम्बल)
ATARACTIC – (अन्टार्कटिका)
SPURRIES – (आश्चर्य र माथि risers)
PURREO – (युरोप)
AURNATTOS – (अन्तरिक्ष यात्री),
WOBEL – (आंत्र, एल्बो, र तल)
शब्द scrambler को लाभ
त्यहाँ शब्द scrambler धेरै लाभ हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई एक तपाईं आफ्नो प्रतियोगिहरु अघि सबै सम्भव शब्दहरू हाथापाई थाहा छ।
बलियो शब्दावली यो खेल विजेता गर्न सफल महत्वपूर्ण छ, तपाईं शब्दहरू सिक्न चिन्ने थप, अधिक संभावना तपाईं खेल हरेक समय जीत हुनेछ।
शब्द scrambler आफ्नो शब्दावली मा सुधार, र आफ्नो प्रतियोगिहरु भन्दा तेज शब्दहरू सक्र्याम्बल गर्न सक्षम, अनुमति दिन्छ भनेर नयाँ शब्द सिक्न सबै भन्दा राम्रो उपकरण छ।
शब्द scrambler उपकरण मात्र समय-कुशल छ, तर पनि सम्भवतः आफ्नो शब्दावली विस्तार र हरेक दिन नयाँ शब्द सिक्दै अन्त हुनेछ।
शब्द scrambler सबैभन्दा प्रभावित र रोमाञ्चक इन्डोर खेल तपाईं आफ्नो मुक्त समयमा खेल्न सक्छन् कि एक मानिन्छ। Unscrambling , Jumbling, र शब्द संग प्ले परम आनन्द छ।
यो नयाँ शब्द सिक्न र आफ्नो शब्दावली विस्तार गर्न तिनीहरूलाई मदत कि बच्चाहरु को लागि एक धेरै फलदायी खेल हो। तपाईं आफ्नो साथीहरूसँग अनलाइन कुनै पनि समयमा खेल्न सक्छन् परिवार।